တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်းလေး – Grab Love Story
ကျွန်တော်နာမည် မောင်မောင်ဖြစ်ပြီး အသက်က၂၆နှစ်ပါ …ကျွန်တော်သည် ကုမဏီတစ်ခုက၀န်ထမ်းဖြစ်သောလည်း..အပိုလက်ဖက်ရည်ဖိုးခရီးသွားဖို့ အစရှိသောဘေးပေါက်အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရန်အတွက်ဌာအပိုအလုပ်တစ်ခု လုပ်ပါတယ် ဒီအလုပ်ကတော့ အရပ်အခေါ်ယောကျာ်းဖာခေါင်း (…မိမိကိုယ်ကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးသူတစ်ယောက်ဟုခံယူ)ဖြစ်ပါတယ်…. ကျွန်တော်သည်ငယ်ကတည်းကလိင်ကိစ္စအင်မတန်ဝါသနာကြီးပြီး လိင်တန်ဆာမှာလည်း တချို့အောစာအုပ်များမှာကဲ့သို့ ၈လက်မ ၇လက်မမရှိပါ ၅လက်မခွဲသာသာရှိပါသည်…
သို့သော်လိုးနေရရင်ရွံရွာမူမရှိအကုန်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးခြင်း ဆေးလိပ်အရက် ရှောင်ရှားခြင်း..(အရင်ကတော့ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဗျ ဒါမယ့်လိုးတယ့်အချိန်သိသာတယ်..မောတယ် တခါတလေမတောင်နိုင်တာ..မောတာ..၂ချီ ၃ချီမဆွဲနိုင်တာရှိတော့ဘဒိုတို့ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်စေချင်တယ်ဗျာ) ….ထမင်းစားရာတွင် လိင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူပုံမှန်စားပေးခြင်း )စသည်တို့ကြောင့် ဖောက်သည်အများအပြားလက်ခံရရှိပါတယ်
ဒီထဲမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသူများကိုရေးသားဖော်ပြပါမည်…တစ်နေ့ မိမိသူငယ်ချင်းများနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထိုင်နေစဉ် ဖုန်းဝင်လာသောကြောင့် နားထောင်လိုက်ရာ (မိမိမှာကိုယ်ပိုင်နာမည်မသုံးဘဲမောင်မောင်ဆိုတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းခံဖောက်သည်များအတွက် သုံးသောနာမည်ဖြစ်သည်ေ ဖ့ဘုတ်အကောင့်မှာလည်းမောင်မောင်အကောင့်တုဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့လိုရင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်) … ‘ဟယ်လို…မောင်မောင်ဆိုတာလားရှင့်” တစ်ဘက်မှအလိုချိုမြိန်သောအသံနှင့်..ဟုတ်ကဲ့…ခင်မျ..ကျွန်တော်မောင်မောင်ပါ …
‘မောင်မောင်ကလေ …ဟိုဟာလည်းမသိရှင့်….” ဘယ်ဟာလည်းခင်မျ … ‘ဖာခေါင်းလားမသိရှင်…..’ ဟာဗျာ ဒဲ့တိုးကြီး..ဟုတ်ပါတယ် ခင်မျ….. ဘယ်နေ့အားလဲမသိဘူးရှင့် …. ရပါတယ် ဒီကအမအားတဲ့အချိန်ပြောပါ…… ဟုတ်ကဲ့ ဒီအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့လည် ၁၂နာရီလောက်လေတစ်ခုခုစားသောက်ပြီး အလုပ်ဖြစ်မလားမသိရှင့် ..အင်း…ရပါတယ်ခင်မျ…. ဈေးကရောဘယ်လိုယူလည်းမသိရှင့်…. ၂သောင်းလောက်ပါပဲ..အမကိုကျွန်တော်သဘောကျရင်တစ်ပြားမှမယူပါဘူး… အကြိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးပါ့မယ်ဆိုတော့တစ်ဘက်ကဟိဟိနဲ့ရယ်နေပါတယ်……. ကျွန်တော်လည်း….’အမကအသက်ဘယ်လောက်လဲခင်မျ……”
အသက်၄၇နှစ်ပါ ကျွန်မကအိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးပါပဲ ..ဒါမယ့်အသိတစ်ယောက်ကမောင်မောင်နဲ့တွေ့ရင်မမေ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ပါ… ‘ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ …ကျွန်တော်တို့ တနင်္ဂနွေနေ့ကျ ပလာဇာက ဂျေဒိုးနပ်ဆိုင်မှာတွေ့မယ်နော်…… ‘ဟုတ်ကဲ့၇ှင့်”ဆိုကာချသါားလေတော့သည်..မိမိလည်းထိုအချိန်မှစပြီး ကြက်ဥ နွားနို့စားသုံးခြင်း …မြဟင်္သာသောက်ခြင်း ဂွင်းထုတာရှောင်ကြည်ခြင်း အိပ်ေ၇း၀၀အိပ်ကာ…ဖြည့်ဆည်းပေးရန်စောင်နေ့လေတော့သည်…. ထိုနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်သောအခါနေ့လည်၁၁ခွဲလောက်တက္ကစီဌားကာထွက်လာ၍ ပလာဇာဂျေဒိုးနပ်ဆိုင်ရှေ့ေ၇ာက်သော ဖုန်းဆက်၍ ဟယ်လို ကျွန်တော်ခုပဲဆိုင်ရှေ့ရောက်နေပြိ.အမမလာသေးဘူးလား အင်းမောင်မောင်ရောက်တော့မယ်..
ကားပိတ်နေလို့ ….ကျောက်မြောင်းဈေးနားရောက်နေပြီ မိမိလည်းဖုန်းကြည့်ကာရပ်စောင့်နေစဉ်… အလွန်အင်မတန်မှရုပ်ရှည်သန့်ပြန့်၍ချမ်းသာပုံရသော..ခန္ဒာကိုယ်မှာ မြတ်ကေသီအောင်တို့ပုံစံ တင်ပါးမှာပြည့်တင်း၍အရပ်မှာ ၅ပေ၅လက်မလောက်ရှိသော …အကြည့်မှာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်၍ ..သင်းပျံသောရေမွေးဆွတ်ထားသောမမတစ်ယောက်မှ … မောင်မောင်လား မသိရှင့်…. ကျွန်တော်လည်းအံအားသင့်ကာ …ဟုတ်ပါတယ်ခင်မျ…မမလား.. အင်း လာလော ဒိုးနပ်နဲ့ကော်ဖီအေးသောက်ရအောင်…ဆိုကာရှေ့ကာဝင်သွားလေသည်… ထို့နောက်မုန့်မှာကာ မမနာမည်က မျိုးမျိုးခိုင်ပါ…ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ …ဆိုကာဟိုကြောင်းဒီကြောင်းပြောလိုက်ရီလိုက်နဲ့မိမိတို့ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်.. ထို့နောက်မမျိုးကမောင်လေးဘယ်သွားမလဲ… ကျွန်တော်…မမဟိုတယ်သွားရင်လူမြင်တယ်ချောင်းရိုက်တွေနဲ့ ကျောက်မြောင်းကကျွန်တော်တိုက်ခန်းသွားမလား…. မမျိုးး…..အင်း မောင်လေး အဆင်ပြေတာပေါ့ …..မမမှာကားပါတယ်လေ တခါတည်းသွားမယ် ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျောက်မြောင်းကကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းကိုသွားဖြစ်ခဲ့လေသည်…
ကျွန်တော်လည်းမမျိုးအား ကုတင်ပေါ်သို့ကစ်ဆင်ဆွဲကာခေါ်သွားပြီးလှဲချကာအကျီင်္ကိုကောက်ချွတ်လိုက်ရာ မမျိုးဝတ်ထားတဲ့လောကတ်သီးနဲ့ဖြူဖွေးလှသောမတင်းမရင်းနို့အုံမှာ.. တိုက်တန်းနစ်ကားထဲမှာကိတ်ဝင်းစလတ်ပန်းချီဆွဲသောအခန်းကိုတောင်သတိရမိစေသည်.. အရမ်းးလှတာပဲမမရယ်…မမျိုးကလည်းမျက်စောင်းထိုးကာ..မောင်လေးကလည်းလူရည်သန့်လေးပါနော်… ဒါမျိုးလုပ်မစားသင့်ဘူး… ဘာလုပ်သင့်လဲ မမရယ့်…..မမလင်လေးလုပ်သင့်တယ်လေဟုဆိုကာမျက်စောင်းထိုးကာပြုံးနေလေသည်…. ကျွန်တော်လည်းမမရယ့်နို့လေးကာယက်ပေးလက် နို့သီးခေါင်းလေးကိုလက်နဲ့ချေပေးလိုက် ..စုပ်ပေးလိုက် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လုပ်ပေးနေမိတယ်…ခဏကြာသော် …မမထဘီချွတ်တော့လေ ဆိုကာချွတ်လိုက်သော် ပန်းရောင်အောက်ခံဘောင်းဘီလေးနဲ့အမွှေးလေး၂ပင်ထွက်နေသောမမျိုးရဲ့အောက်ပိုင်းအလှကိုတွေ့ရသော် မိမ်ညီတော်မောင်မှာအလွန်အင်မတန်မှထောင်တက်လာပါတော့သည်….
ကျွန်တော့်လီးးထိပ်ကိုလျှာလေးနဲ့ကစားပေးလိုက် လီးကိုရေခဲချောင်းစားသလိုစုပ်လိုက် ယက်လိုက်ဥလေးတွေဆော့လိုက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမှာ ကလေးတစ်ယောက်နဲံတူနေလေသည် .. ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပက် ပက် ဗျက် အားးမမရယ် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကျွမ်းလိုက်တာ ငါ့မမကဆိုကာ မမမျိုးရဲ့ကလစ်လေးကိုဖြုတ်ကာ ပါးစပ်မှာတေ့ကာအတင်းဆောင့်နေမိတယ် ..အာအအအအ အအ ဖွတါ် ပျြွတ် ပြွတ် အအအ မောင်လေးကို မူတ်ပေးမယ်ဆိုကာလီးကိုအာခေါင်းထဲထည့်ပြန်ထုတ်နဲ့အလွန်အင်မတန်မှမိမိမှာကောင်ေးနမိလေသည်
လရေတွေလည်း၇ွဲကာမမမျိုးပါးစပ်မှာလရေတွေသရေတွေစိးကျကာ မိမိမှာအလွန်အင်မတန်မှကောင်းနေမိသည်..မိမ်ိလည်း ခဏမမရေ ပြီးသွားလိမ့်မယ် ဆိုကာ မမမျိုးအဖုတ်ကိုပါးစပ်တေ့ကာအစွမ်းပြန်ပြရလေသည် စောက်စိကိုလျှာလေးနဲ့လျက် နူတ်ခမ်းနဲ့စုတ်ပြန်လွှတ်လုပ်ပေးနေသည်…ပြွတ် ပြွတ် ဖူးး ပြွတ် ပြွတ် အာားးမမရေကောင်းလားမောင်လေးရေ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ …ပြွတ် ပြွတ် နဲ့စောက်ပတ်ကိုဖြဲ အကွဲကြောင်းကိုလျှာလေးနဲ့ထိုးကာဆော့ပေးနေသည် လျှာနဲ့လိုးပေးနေခြင်းဖြစ်သည် ပလပ် ပြွတ်ပြွတ် ထိုမျှမကဖင်ပေါက်ကိုလည်းလက်ကလေးနဲ့ဝလုံးပုံသဏ္ဏာန်ဆော့ပေးနေလေတော့သည်..အားးးမောင်လေးရေ သေပါတော့မယ် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ …
အူး… ဟူးးး ဟုး… အူးးးမောင်လေးရယ် ဆိုကာအရည်တွေစီးကျလာပါတော့တယ် ကျွန်တော်လည်း မိမိဝါသနာအတိုင်းမရွံရွာဘဲယက်ပေးလိုက် လက်နှစ်ချေုာင်းလည်းတပြိုင်နက်ဆွဲနိူ်က်ပေးနေသည်…ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အချက် ၃၀လောက်နိူက်လိုက်လွှတ်ပေးလိုက် ထိုစဉ်စောက်ရည်ပန်းထွက်လိုက်နဲ့မမျိုးတစ်ယောက်ကာမအရသာအပြည့်အ၀ခံစားနေရတော့သည်…. ထိုစဉ်ရာသီဥတုပူသောကြောင့်ရေချိုးသန့်စင်ရန်လိုောသာလည်းမလုပ်ဘဲ တန်းလုပ်သောကြောင့်အဖုတ်နံလရေနံများမှာမွန်ထူးနေလေတော့သည်….. ထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းမမျိုးကိုလှဲအိပ်ခိုင်းမျက်နှာလေးကြည့်လိုးချင်သောကြောင့်.. .စောက်ဖုတ်ဖ၀တွေ့တေ့ကာထိုးထည့်လိုက်လေတော့သည်.. .ပြွတ်…အား..လီးကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းတေ့သွင်းကာမမျိုးကိုနူတ်ခမ်းလေးတခါအနမ်းပေးလိုက်လေသည်..
.ပြွတ်..မမျိုးလိုးမယ်နော်.. အင်းလိုးယောကျာ်းတဲ့ကျွန်တော်လည်း အင်မတန်မှနန်းဆန်၍ကျက်သရေရှိသောမမျိုးအားတရပ်စပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေလေမိသည်..ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဆောင့် ယောကျာ်းဆောင့် ဆောင့်ဆောင့် မောင်လေးဆောင့် ဖတ် ဖတ် အအအ အား အား အား ဖတ် ပြွတ်ဖွတ်ဖွတ်ဘွတ်ဖွက်တရပ်စက်ကျွန်တော်လည်းအံကြိတ်ကာဆောင့်နေမိလေသည်..အအာအ ကောင်းလိုက်တာ အာာအ ဆောင်နေ့ရင်းတန်းလန်း လီးကိုပါးစပ်နားတေ့ပေးပြီး စုပ်ခိုင်းလိုက်သည် …ပလပ် ပြွတ် အားးမောင်လေးရယ် မာနေတာပဲ သံချောင်းကြီးကြနေတာပဲ …ပြီးတော့ မမ ပူံစံပြောင်းရေအောင်ဆိုကာ ကုန်းခိုင်းလိုက်လေသည်
…မမျိုးရဲ့ဖင်ဟာကားထွက်နေပြီးအလယ်မှာစောက်ဖုတ်မှာစူထွက်နေသသည်ကိုကြည့်ပြီး မိမိလည်းလိုးချင်လွန်းလှသောကြောင့်ထိုးထည့်လိုက်လေသည်… အူး…..အား…လီးမှာနွေးထွေးပြီး မိမိလည်းစတင်ဆောင့်ပါတော့သည် ..ဖတ်ဖတ် ဖတ် ဘွတ် အအအအမောင်လေးဆောင့် မမလိုးခံချင်လွန်းလို့ ဒီလီးကိုချစ်လိုက်တာ ဒီလီးနဲ့လိုးခံချင်လို့အရဲစွန့်လိုက်တာ..ဆောင့်ဖတ် ဖတ် ဖတ် အအအအအအအအအအအ အား အား အအ ကွဲအောင်ဆောင့် သွေးထွက်အောင်ဆောင့် အအ မမျိုးရေ ကောင်းလိုက်တာ …မောင်ရေ ယောကျာ်းရေ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ေ၇ မမရေ မောင်ရေ အအ မမရေ နဲ့အချက်၈၀ခန့်အကြာမမပြီးပြီ ပြီးပြီနဲ့အားးဆိုကာရှေ့ကိုယိုင်ကျသွားပါတယ် မိမိလည်းအလျော့မပေး မှောက်လျက်လှဲနေလျက်ကို လိုက်ဆောင့်ပါသည် အအအ မောင်လေး လိုးသတ်နေတာလား အအအအဖတ်ဖတ်ဖတ် ဖတ်နဲ့၂၀မိနစ်ခန့်အကြာမှာမိမိလည်းလရေများပန်းထုတ်ကာပြီးသွားပါလေတော့သည်….
မောင်လေးရယ်ကောင်းလိုက်တာ ..ဘာလို့အဲ့လောက်အလိုးတော်တာလဲ မမျိုးကလှလို့ချစ်လို့ပေါ့ မမျိုးနောက်တစ်ခါလည်းခေါ်ဦးမှာနော်.. ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ခေါ်ပါ အလကားလိုးပေးမှာပါ … ဟိဟိ…..ဆိုကာလရေတွေစောက်ရည်တွေပေနေတဲ့လီးကိုမမျိုးကိုတေ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ် မမျိုးလည်းအချိန်မဆိုင်းတန်းစုတ်ပေးပါသည်…ပြွတ် ပြွတ် မိမိလည်းစောက်ေ၇အလွန်အင်မတန်မှကြိုက်သောကြောင့် မမျိုးရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုပါးစပ်ကလေးနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေမိသည်…ခဏကြာသော်တူတူရေချိုးကာ ..မမျိုးအားအိမ်သာဘေစင်ပေါ်ခြေထောက်တစ်ဖက်တင်ကာ အရမ်းလိုးချင်သောကြောင့်တစ်ချီအမြန်ရပ်ဆွဲလိုးပေးလိုက်သည်…
ဖတ် ဖတ် ဖတ် အအအအ ဥရိုက်သ့ အခန်းလုံထဲအသံပြန်သံများနှင့် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် နဲ့စောက်ရည်လရေများအိမ်သာဘိုထိုင်မျာပေကျံနေလေတော့သည် ရေချိုးဇလားထဲထိတောင်စင်ထွက်နေလေတော့သည် …အအအအဖတ် ဖတ် မမျိုးရဲ့နို့ကိုဆွဲညစ်ကာတရပ်စပ်အချက်၂၀၀ခန့်ဆောင့်မိနေလေတော့သည် အအအဖတ်ဖတ် အအမောင်လေးရယ်ကောင်းလိုက်တာ ဒီလိုတစ်ခါမှမလိုးဖူးဘူး အအူးး….အးးးဟူးးးးးဖတ်ဖတ် ဖတ် နဲ့နောက်ဆုံးအပြီးမှာအားနဲ့ တန်းဆောင့်မိတော့သည်…
အားး…..မမျိုးဖင်လည်းရှေ့ကိုတွန်းကျကာ..နှစ်ယာက်ရေချိုးကန်ထဲမှိန်းနေမိသည်….. ခဏအကြာမမျိုးအားရေချိုးပေးဆပ်ပြာတိုက်ပေးအဖုတ်တွင်းဖင်ပေါက်အတွင်းမကျန် ဆပ်ပြာတိုက်နှိပ်နှယ်ပေးကိုယ်လက်သုတ်သင်ပေးပါတော့သည်… မသွားခင်တံခါးဝမှာနှစ်ယောက်သားမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ကစ်ဆင်ရိုက်ကာအပြန်အလှန်ကိုင်ပေးနေကာ မမျိုးမှာမူတ်ချင်သောကြောင့်ခဏပေးမူတ်ကာ…… မမျိုးကိုသူ့ကားထဲထိလိုက်ပို့ကာတိုက်ခန်းပေါ်တက်တရေးပြန်အနားယူနေမိလေသည်……….